चीनले नेकपा र कांग्रेस फुट्नबाट बँचायो, ओली–प्रचण्डसँग फुट्ने हिम्मत छैन : चीन मामिला जानकार झा -योहोखबर
काठमाडौँ - राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता जनताका समस्यामा भन्दा कुर्सीको लडाइँमा मात्रै केन्द्रित देखिएको भन्दै विज्ञहरुले चासो प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले नेतृत्वकर्ता र दलहरुप्रति वितृष्णा चुलिन थालेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।
देश यतिबेला कोरोना महामारी र बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट गुज्रिरहेको छ । सीमा अतिक्रमणको बल्झिएको घाउ त छँदै नै छ । तर, जनताको सेवा गर्न भनेर सत्ताको केन्द्रमा पुगेका वा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता उनीहरूप्रति उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् । जनताको समस्यातर्फ भन्दा पनि आफ्नो व्यवस्थापनतर्फ नै उनीहरूको चासो देखिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भएर मुलुकमा स्थिरता कायम भए पनि परम्परागत सोच र चिन्तनमा परिवर्तन आउन नसक्दा नेताहरू आफ्नो परिवर्तनमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन् । त्यसो त, कोरोना विपत्ति, लकडाउन, बाढीपहिरो लगायतका त्रास र जोखिम उच्च रहे पनि दलहरूले त्यसबाट सचेतना अपनाउन कुनै सहकार्य गरेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा रहेर चीन मामिला जानकार प्रा. डा. राजीव झासँग योहो टेलिभिजनको योहो बहस कार्यक्रममा गरिएको कुराकानी । थप जानकारीका लागि पूरा भिडियो रहेर्नुहोस् ।
पहिलो पार्टी र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियतमा रहेको नेकपाभित्रको विवाद चर्किँदै गर्दा यसको असर आमनागरिकमा समेत पर्न थालेको छ । परिवर्तनको अगुवा मान्ने दलहरुको आन्तरिक भागबण्डा, विवाद र खिचातानी देखेर व्यवस्था परिवर्तनकै माग समेत उठ्न थालेको छ ।
४३ दिन अघि २०७७ श्रावण २३ १४:३४ मा प्रकाशित